१४ जिल्लाका ७१ प्रतिशत भूकम्प पिडित पुनर्निर्माण प्रक्रियामा - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
१४ जिल्लाका ७१ प्रतिशत भूकम्प पिडित पुनर्निर्माण प्रक्रियामा
फागुन १४, २०७४ 440 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ७० प्रतिशत पिडितलाई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराएको छ । प्राधिकरण स्थापना भएको २ वर्षमा ६ लाख १० हजार ५ सय भूकम्प पिडितलाई अनुदान दिएर पुनर्निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराइएको हो ।
कुल ६ लाख ६७ हजार ६ सय ६२ पिडित परिवारमध्ये १ लाख २ सय ३६ परिवारको घर पुनर्निर्माण गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले बताए । भूसालका अनुसार ३ लाख ३२ हजार ३ सय २१ परिवारका घर हाल निर्माणाधीन छन् ।
भूकम्प पिडितका निजी घर पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्राधिकरणको भनाई छ । अहिलेको गतिमा काम हुने हो भने बर्खाअघि ६० प्रतिशत घरको पुनर्निर्माण पूरा हुने भूसालले दाबी गरे ।
पुनर्निर्माणको समयसीमा तोकेर प्राविधिक टोली खटाइएको तथा निर्माण सामाग्री र दक्ष जनशक्ति अभाव नहुँदा अनुदान लिएर घर बनाउने पिडितको संख्या बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रभावित जिल्लामा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन घरको पूर्ण विवरण प्राधिकरणसँग आइनसकेकाले सम्पन्न भएका घरको संख्या अझै बढ्न सक्ने प्रवक्ता यमलाल भूसालले बताए । उनका अनुसार सम्झौता भएका १ लाख ४३ पिडितमध्ये ९० हजार ८ सय ५० परिवारको पछिल्लो तथ्याङ्क प्राधिकरणमा आइपुग्न बाँकी छ ।